Yan Aung: January 2009
အဝေးက မအတွက် ပူပင်သောကတွေ
မနက်ဖြန်တွေကို ကြိုဆိုနိုင်ပါစေ မ ရယ်...
ကီးဘုတ်ကိုဆွဲ၊ စိတ်အားကို ခဲကာ။
ရှည်ကြာထိုင်လစ်၊ ပို့စ်အသစ် ထွက်မလာ
ရေသာသောက်၍ အိပ်သည်နှင့်လေး။ ။
ဂူဂယ်လ်ရီဒါ၊ ပို့စ်သစ်တွေ တက်လာ
ငါလည်း ဒီတစ်ခါ၊ အဟုတ်တကယ်ရေးမှာ
လက်သာညောင်း၍ အိပ်သည်နှင့်လေး။ ။
စားပွဲပေါ်မှောက်၍ အိပ်သည်နှင့်လေး။ ။
ရှိသမျှ ဘရောက်ဇာ၊ ပိတ်ခါသိမ်းတော့မည်…
ပြီးလျှင် စောင်ခြုံကာ၊ ထွေးခါအိပ်တော့မည်…
(မော်ဒန်တျာချင်း ... ကန်ယို)
နတ်သျှင်နောင် - ပြည်လှဖေ
သေပေစေ ရင်ကိုမြေကတုတ် မဆုတ်မတွန့် မရွံ့တဲ့သူတွေ…
(တောင်ကညို ပြိုတော့မယ် မှိုင်းမှိုင်းမှုန်ဝေ မိုးသက်တွေ လေဝှေ့လို့ တရွေ့ရွေ့ယူသလေ…) တိမ်ဦးလေပြေ လွမ်းငွေ့တွေဝေ၊ ဖော်မစုံကျွမ်း လွမ်းစိတ်တွေပွေ…
ချစ်တဲ့သူ ဓာတုကလျာဆွေ လွမ်းရတဲ့ဖြစ်အင် ထင်မြင်မိစေတဲ့ ဘုရားတိုင် စစ်ချီရတုတွေ ရေးလို့…
သြော် ကျေးငှက်ကို စေလိုစေ… ဖြေလည်းငယ် ဖြေပြေပါနိုင်ဘဲ စစ်ထွက်ဆဲ တောင်ငူ ဘုရင်မှာလေ….
ပေါ်နွေလလျှင်၊ တောင်ကခြိမ့်မြူး၊ မင်းလွင်ဦးနှင့်၊ ပျံ့ပျူးချုပ်ဆိုင်း၊ မင်းလွင်ဦးနှင့်၊ တိမ်ညိုမှိုင်းထပ်၊ ပြက်လျှပ်ပြကာ၊ စိမ်းဝါမိုးပန်း၊ ထွေထွေစွန်းက၊ ရေသွန်းသာကြည်၊ ပျော်ရမည်ကို၊ မြရည်သတ်မှတ်၊ ရောက်ခဲလတ်ဟု၊ ချစ်ထွတ်တင်သည်၊ ပြာစင်ရွှန်းလတ်၊ ဖြူဝင်းမွတ်လျှင်၊ ကြာညွတ်ဖယောင်း၊ နေရှိန်ပြောင်းသို့၊ ဆင့်လောင်းလွမ်းဝှန်၊ ရှိလိမ့်ဟန်ကို၊ တိမ်စွန်လေလျှင်၊ ဖူးရောက်ချင်သည်…
(ပိတောက်တွေ ရွှေအရည် လူးကြမယ့်အခြေ၊ ပုလဲငုံ စံပယ်ဖြူ ဖူးခိုက်ဝေေ၀။
ပန်းမျိုးစုံရာသီစုံကုန်ကူးခဲ့ပေါ့လေ၊ ချစ်သူကို ရည်စူး ခူးတဲ့လို့ခြွေ…)၂
ကိုယ်တိုင် လှရာရာ ရွေး… ပန်မပေးရ ဆံမြညှာကေ စစ်မြေမှာ ကြာညောင်းရက်ရှည် ရောက်မယ်အထင်နဲ့ မျှော်တဲ့သူ ပူဗျာပွေ တတွေးတွေး ဆွေးရှာရော့မယ်လေ။
ဒီသီချင်းလေးကို ကြိုးစားရှာဖွေပေးတဲ့ မလေးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
ပြည်လှဖေ ဆိုထားတဲ့ 'နတ်သျှင်နောင်' သီချင်းလေး ဘယ်မှာရနိုင်မလဲ.
"တောင်ကညို ပြိုတော့မယ် မှိုင်းမှိုင်းမှုန်ဝေ မိုးသက်တွေ လေဝှေ့လို့ တရွေ့ရွေ့ ယူသလေ... "
youtube မှာ တွေ့မယ်ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်. ကျွန်တော် ရှာနေတာ ဘယ်လိုမှမတွေ့တော့လို့ပါ. ဖိုရမ်တွေမှာ ၀င်ရှာတာလည်းစုံပြီ.း(
စိန်ခြူးကြာညောင်သီချင်းလေး လိုချင်လို့. ရတနာဦးပြန်ဆိုထားတယ်လို့တော့ သိုးသိုးသဲ့သဲ့ ကြားဖူးတယ်. ဒါပေမယ့် ရှာမရပြန်ဘူး. လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်ကိုယ်တိုင် ဆိုပြထားတာမဟုတ်လည်း ရပါတယ်. ကျေးဇူးပြု၍ပါ....း)
လေဘာတီမမြရင်ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပဲဗျ. စာသားတစ်ကြောင်းပဲ မှတ်မိတယ်. မန္တလေးမှာနေတုန်းက အငြိမ့်ပွဲတွေမှာ ဆိုပြတာ ကြားဖူးတယ်. ဘာတဲ့..
"ပေတစ်ရာပင် လျှောက်ပါလို့ မြင်သလောက် ပြလိုက်ချင်ပါသည်...." ဆိုတာလေ...
အဲဒီ့သီချင်းလေးတွေကို ရှာဖွေပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ရှာပေးနိုင်သူများရဲ့အကြိုက် ပို့စ်တစ်ခုစီ ကျွန်တော် ပြန်ရေးပေးမယ်. ဘယ်လိုသဘောရလဲ. :))))
အခုလောလောဆယ် ဈေးဝယ်ထွက်လိုက်ဦးမယ်. တစ်ယောက်တည်းနေထိုင်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ လူပျိုနုနုထွတ်ထွတ်လေးတွေရဲ့ ဘ၀ဟာ ဒီလိုပဲဗျာ. အရမ်း စထရပ်စ်များတယ်. နောက်မှတွေ့မယ်ဗျို့.. ဘိုင်...
ဦးဇင်းစာရေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါယကာရဲ့ဘလော့မှာပိုစ့်အဖြစ်တင်ပေးစေချင်တာပါ။ အဲဒါကတော့ဦးဇင်းအခုစစ်ကိုင်းတောင်မှာ သင်တန်းတိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်ဖို့ ကိစ္စ အတွက် အခက်အခဲတွေ အဆင်ပြေစေချင်လို့ ပါဒါယကာ။
စစ်ကိုင်းသင်တန်းအတွက် အခုသင်တန်းမှာ လူတွေပါ အခမဲ့သင်ကြားပေးဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ ၂၁.၁၂၀၀၉ ရက်နေ့ကို သင်တန်းဖွင့်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သင်တန်းမှာက လျှောက်လွှာခေါ်ယူကြည့်လိုက်တော့ လာရောက် လျှောက်ထားသူက ၅၀ ကျော်နေပါတယ်။ ဦးဇင်းလျှောက်လွှာတွေကိုပိတ်လိုက်ရပါတယ်။ စက်အင်အားက ၆ လုံးပဲရှိတော့ စက်အင်အားကနည်းတယ်လေ။ မီးစက်ကလည်းအခုအချိန်အထိအလှူရှင်မပေါ်သေးတော့ ဦးဇင်းတော်တော် ခက်ခဲနေပါတယ်။
ဒါယကာအနေနဲ့ ဘလော့တွေမှာ မီးစက်အလှူရှင်နှင့် ကွန်ပျူတာ အလှူရှင်များရှိပါကဆက်သွယ်နိုင်အောင် ရေးသားပေးစေလိုပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေလိုအပ်ရင်တော့ဦးဇင်းရဲ့ ဘလော့ www.kovida.multiply.com ကနေ ယူသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါယကာ...
ဒါယကာစိတ်၏ချမ်းသာခြင်းကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း အပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံ ၍ပညာပါရမီဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သ လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ့စာလေးကို ရပြီးတော့ ကျွန်တော် ဘလော့ဂ်တစ်ချို့ လိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ်. ဦးဇင်းကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီရေးသားပေးထားကြတာလေးတွေ တွေ့ရတော့ ၀မ်းသာကြည်နူးမိပါတယ်. အဲဒီ့ထဲကမှ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးသားဖြန့်ဝေပေးထားတဲ့ ကိုပီကေရဲ့ ပို့စ်လေးကိုလည်း ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ. အားလုံးပဲ ပညာဒါဖြည့်စွမ်းနိုင်ကြပါစေ...
၄။ ၁၀ ကီလိုဝပ်ထွက် မီးစက်တစ်လုံး (မီးမရှိလျှင် လုံးဝ သင်မရပါ။ လက်ရှိ လျှပ်စစ်မီးမှာ ပျက်တလှည့်
နိုင်ငံခြားမှ လှူဒါန်းလိုသူတွေအတွက် PayPal နှင့် UK Bank Account နှစ်မျိုးစလုံးနဲ့ လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ ဦးဇင်း ဦးကောဝိဒရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ဂ်ကိုလည်း သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဦးဇင်းဘလော့ဂ်မှာ ကျနော် အပေါ်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ ဦးဇင်းရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဓါတ်ပုံနဲ့တကွ အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါတယ်။ သွားရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်အနေနဲ့ တောင်းဆိုချင်တာက အလှူငွေမှ မဟုတ်ဘဲ ကူညီတဲ့အနေနဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို တတ်နိုင်သလောက် ဖြန့်ဝေပေးစေချင်ပါတယ်။
နှင်းမှုန်တွေ ပြတင်းပေါက်ကို ရိုက်ခတ်လို့
ငါကိုယ်တိုင်ရဲ့ ချို့ယွင်းမှုတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်မှာပေါ့.
'လောကကြီးကိုက... မတရားပါဘူး...' ဆိုတဲ့
ပိုပြီးတော့ပဲ သက်တောင့်သက်သာ ရှိသလိုလို
အသည်းကွဲနေတဲ့ ၀ီစကီတစ်ခွက်ပါရင် ပိုတောင်ပြည့်စုံလေမလားပဲ..
ဒီလိုနဲ့ ငါ့ဒိုင်ယာရီဟာ နောက်ပြန်လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်.
'ငါဟာ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရှာဖွေရင်းနဲ့ ငါ့ငြိမ်းချမ်းမှု ပျောက်ဆုံးခဲ့တယ်'
ထန်းလျက်ကျိုနေကြရတဲ့ ဘ၀တွေ ထန်းလျက်ခဲလို မချိုမြနိုင်သလိုလို
ဘယ်ဟာမဆို ၀ါးမျိုကိုက်ခဲဖို့ အသင့်ပြင်ထားတဲ့ ငါ့ပါးစပ်ပေါက်တွေအတွက်
ငါက ထူး မင်းက ရူးပဲလေ...
ဒီလိုနဲ့ပဲ ဆောင်းရာသီဟာ သူ့ဝတ်ရုံလွှာကို သိမ်းခေါက်ခဲ့ပြီ...
စမ်းလျှောက်နေတဲ့ ခြေထောက်တွေ အချင်းချင်း ခလုတ်တိုက်လို့
ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကျိုးမှ ငါ့နှလုံးသားကို တံခါးလာခေါက်ကြတယ်.
ဒီလိုနဲ့ စိတ်တိုင်းမကျခဲ့တဲ့ ငါ့စာမျက်နှာတွေ
ဖိုရှိုက်နေတဲ့ ဒီနှလုံးသား ဘယ်နေရာက အင်အားတွေ ရနေပါလိမ့်...
တိတ်တဆိတ် ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ ခြေသံတွေဟာ
မှောက်မှားတတ်တဲ့ ငါဆိုတဲ့ လောကသားတစ်ယောက်
ဒီစက်ဝန်းပေါ်မှာ ငါပြေးလွှားနေခဲ့တာ နှစ်တွေ အတော်ကြာပြီ.
တကယ်ဆို ငါဟာ မျဉ်းဖြောင့်တစ်ကြောင်းအယောင်ဆောင်ထားတဲ့
အဲလိုတွေးမိခါမှ အတ္တအမောတွေက ဖောက်လာတတ်ပြန်ရော...
လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ ပိုအသက်ဝင်လာတယ်.
ဖလင်ပြားတွေ၊ ရုပ်သေပြကွက်တွေ အရှိန်အဟုန်နဲ့
ဒါကိုပဲ တဆက်တည်း ဖြစ်သလိုလို
ငါ့ဒိုင်ယာရီဟာ အိပ်စက်ဖို့ ခွင့်တောင်းနေခဲ့ပြီ
မနက်ဖြန်ဆိုရင် မင်းရဲ့ ခေါင်းအုံးအဖြူလေး အ၀ါရောင်ဖြစ်တော့မယ်.
အေးချမ်းစွာ အိပ်စက်အနားယူတော့ ဒိုင်ယာရီရေ...
ငါ့အချင်းမျဉ်း စက်ဝန်းအပြင်ဖက် လမ်းလျှောက်ဆန့်ထွက်နိုင်ဖို့
မီးလျှံတွေ အရှိန်ရမယ့်အချိန် ငါစောင့်မျှော်နေတယ်.
တင်မယ်တင်မယ်နဲ့ မတင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ကိုမျိုးချစ်မြန်မာရဲ့ အင်တာဗျူးလေးပါ. ဒီအင်တာဗျူးမှာ ခုနှစ်သက္ကရာဇ်အမှားတစ်ခုရှိနေပါတယ်.
ကျွန်တော်ဘလော့ဂ်စရေးခဲ့တာ ၂၀၀၆ ဒီဇင်ဘာလို့ ပြောရမယ့်နေရာမှာ ၁၉၉၆ လို့ ပြောမိတယ်ဗျ. (ခရစ်စမတ်မှာ လွမ်းမူးမူးတာ မပြေသေးလို့)
၂၀၀၇ နေရာမှာလည်း ၁၉၉၇ လို့ ပြောမိပြန်တယ်. အဲဒါကတော့ မ ကိုလွမ်းလို့ပါ. :)
စတာပါဗျာ. ဒီအင်တာဗျူးလေးထဲမှာ ကျွန်တော်ဘလော့ဂ် ဘာကြောင့် စရေးဖြစ်တယ်. ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ စရေးဖြစ်တယ် အပါအ၀င် လက်ရှိဘလော့ဂ်တွေအပေါ် ကျွန်တော်မြင်မိတဲ့ အရာလေးတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ဆွေးနွေးထားပါတယ်. ဆရာမောင်စူးစမ်းရဲ့ Blogger Instinct ကို ပြန်လည်ချေပထားတာလည်း ပါပါတယ်.
လက်ပ်တော့မိုက်နဲ့ပဲ လှမ်းပြီး ပြောရတာဖြစ်လို့ ကျွန်တော့်အသံကလည်းေ၀၀ါးနေတာကို သည်းညည်းခံပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်. အပြင်မှာ အသံပိုကောင်းတယ်ဗျ. (မ အသိဆုံးပါ... :) )
အပင်ပန်းခံမေးခွန်းတွေထုတ်ပြီး ဟိုးအဝေးကြီးကနေ အင်တာဗျူးပေးတဲ့ ကိုမျိုးချစ်မြန်မာကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း ဒီနေရာကနေ ပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာ...
လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်ရဲ့ အွန်လိုင်းဗားရှင်းကို လိုက်ဖတ်ကြည့်နေရင်းက ဒီသတင်းတစ်ပုဒ်လေးကို ဖတ်မိတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး. ကျွန်တော့်ရှေ့က Screen ကြီးကို အကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေဖြစ်ခဲ့တယ်. ၂၀၀၉ တောင် ရောက်ခဲ့ပြီပဲ....
မြန်မာဘလော့ဂ်ဂါများ စုစည်းထားတဲ့ 'အနာဂတ်လှိုင်း၏ ဆုံမှတ်များ' စာအုပ်တစ်အုပ် ထွက်ရန် မနှစ်ကတည်းက စီစဉ်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ စာအုပ်ထဲမှာ မြန်မာဘလော့ဂါတွေ ရေးသားထားကြတဲ့ ...
သုတ၊ ရသ၊ ကဗျာ၊ ခရီးသွားဆောင်းပါး၊ နည်းပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆောင်းပါး၊ လေ့လာဆန်းစစ်ချက် တွေ၊ ခံစားချက်ဝတ္ထုတိုအစရှိတဲ့ စာပေတွေကို ကလောင်ရှင်အသစ်တွေရဲ့ လက်စွမ်းပြမှုနဲ့ အင်တာ နက်ပေါ်မှာ တွေ့ရှိနေပါတယ်။ အင်တာနက် ဘလော့ဂ်တွေပေါ်မှာ မြန်မာစာသားနဲ့ လွယ်လင့်တကူ ရိုက်တင်ပြီး အချင်းချင်းလျင်လျင်မြန်မြန် အချက်အလက်တွေကို လွင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ ကွန်ယက်ကြီးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုစွမ်းဆောင်နေကြတဲ့ မြန်မာဘလော့ဂ်ဂါတွေ စုစည်းတင်ပြမယ့် စာအုပ်ကို စိတ်ဝင်စားကြသူတွေ အတွက် G-Talk မှာမြန်မာလိုရေးလို့ရအောင် ကနဦးတီထွင်ဖန်တီးပေးထားတဲ့ Alpha Computer မှ ကိုရဲမြတ်သူကို လျှပ်တစ်ပြက်သတင်းဂျာနယ်က တွေ့ဆုံမေး မြန်းခဲ့ရာ-
၂ဝဝ၇ စက်တင်ဘာ မတိုင်ခင် ကတည်းကစီစဉ်တာ။ကျွန်တော်တို့ Alpha ဒီစာကိုထုတ်မှာ မဟုတ် ဘူး။ ဝိုင်းဝန်းအကြံပြု ဆွေးနွေးပေးတာနဲ့ Promotion လုပ်ပေးရုံ သက်သက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အပြင် Imforithm-maze က ကိုသောင်းစုငြိမ်းတို့အဖွဲ့လည်းပါတယ်။ ဒီစာအုပ် ပြန်ထုတ်မယ့် အချိန်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဆင်မပြေဖြစ်သွားတာ။
ပြောရမယ်ဆိုရင်အရှည်ကြီးဗျ။ အဓိကကတော့ ဘလော့ဂ်ဆိုတာ မီဒီယာပုံစံအသစ်လေ။သူက one to one လည်းမဟုတ်ဘူး။ one to many လဲမဟုတ်ဘူး။ many to many ဗျ။ တစ်ဖွဲ့က လုပ်ရင်း နောက်တစ်ဖွဲ့နဲ့ ပေါင်းဖြစ်။ အဲဒီကနေနောက်အဖွဲ့တွေအဖွဲ့တွေနဲ့လုပ်ကြတာ။
သုံးထားတဲ့ စာမူတိုင်းဟာ စာမူရှင်က လိုလိုလားလားခွင့်ပြုထားတာ တွေလား။
ဒါတွေက သူတို့အချင်းချင်း စီစဉ်ကြတာ။ အရွေးမခံရတဲ့သူတွေကတောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြ သေးတယ်။
နိုင်ငံရေးနဲ့ပါတ်သက်တာတွေမပါတော့ နဂိုကတည်းက ပြည်တွင်းမှာ ပုံနှိပ်ဖြန့်ချီဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး စုစည်းခဲ့တာလား။
ဟုတ်တယ်၊ပြီးတော့ စာပေစိစစ်ရေးက တရားဝင်ခွင့်ပြုပြီး ပြည်ပကိုပါ ဖြန့်ဖို့စီစဉ်ထားတာ။ ပြည်ပကသူတို့ Blogger တွေ အချင်းချင်းဝယ်လိုအား အုပ်ရေ(၁ဝဝဝ)ကျော် အနည်းဆုံးရှိတယ်။
ဒီစာအုပ်က ဘလော့ဂ်ဂါတွေ အားလုံးမြန်မာပြည်ကလူတွေချည်းပဲလား။
Alpha က ဦးဆောင်ပြီးစုစည်းခဲ့တာလား။ စုစည်းမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သူတွေကို သိပါရစေ။
မဟုတ်ဘူး။ သူတို့အချင်းချင်းလုပ်ကြတာ။ မြန်မာ Content တွေများ လာအောင်လုပ်တဲ့ အလုပ် တွေမို့လို့အားပေးတာပဲရှိတယ်။ Blogger တွေ အချင်းချင်းဦးဆောင်ကြတာပါ။ မန္တလေးဖက်ကဆိုရင် ဇော်မိုးအောင်၊ မောင်လှ၊ရန်ကုန်ဘက်ကညီလင်းဆက်၊ဘာညာ၊ဗလာဂေါက်၊မျက်လုံးတို့ပါကြတယ်။
အခုလိုစုစည်းဖြစ်ဖို့ ဘယ်သူ့စိတ်ကူးလဲ။ဘယ်သူကစပြီး initiate လုပ်တာလဲ။
Blog တွေပေါ်မှာ သူတို့ရေးတဲ့ဟာတွေက နဂိုကတည်းကရှိနေပြီးသား။ တခြား အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနဲ့ သူ့အလုပ်သူ လုပ်နေကြတဲ့သူတွေ။ သူတို့ ရေးထားတဲ့စာတွေက Taste အသစ်တွေကို ရတယ်။ စာပေလိုင်းထဲကမဟုတ်တဲ့ ဒီပြင့် Field ထဲကလူတစ်ယောက်ရေးထားတဲ့အရသာ၊ Concept ကို ရစေချင်တယ်။
အခုလောလောဆယ်မှာ ဘယ်သူဦးဆောင်မှန်းမသိတော့ဘူး။ စာအုပ်ကတော့ အဆင်သင့်ရှိနေပြီးသား။
ဇန်န၀ါရီ (၂) ရက်ရဲ့ မနက်ခင်းက ထုံးစံအတိုင်း နှင်းတွေ ဝေနေခဲ့တာပါပဲလေ...
တတီတီနဲ့ အဆက်မပြတ်အော်နေတဲ့ နှိုးစက်ကို အသာအယာလှမ်းပိတ်လိုက်ပြီး ရင်ဘတ်ပေါ် လက်နှစ်ဖက်ယှက်တင်လို့ မျက်နှာကျက်ဖြူဖြူကို တည်ငြိမ်စွာ စိုက်ကြည့်နေဖြစ်ခဲ့တယ်...
နှုတ်ခမ်းထောင့်စွန်းမှာ ပြုံးတာလား၊ မဲ့တာလား သူကိုယ်တိုင် မသိလိုက်ရတဲ့ မျဉ်းကွေးလေးတစ်ခု ဖြစ်ထွန်းသွားခဲ့တယ်.
မနေ့တစ်နေ့ကလိုပါပဲ... အရာရာဟာ လတ်ဆတ်ပီပြင် ပြတ်သားအသက်ဝင်နေဆဲ....
လင့်ရိုဗာကားအစိမ်းလေးက အ၀ိုင်းကိုကွေ့နေချိန်မှာ သူ့လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ နို့ဆီဗူးထဲက နို့ဆီတွေ သူ့ပေါင်ပေါ်ကို စောင်းကျသွားခဲ့တယ်.
ဘယ်လိုမှ လှမ်းဖမ်းလို့ မမီနိုင်တော့တာကို သိလိုက်ရတာမို့ သူ့ဘောင်းဘီပေါ်ကို စီးဆင်းသွားတဲ့ နို့ဆီတွေကို ခံစားချက်မဲ့စွာ လိုက်ကြည့်နေလိုက်ခဲ့တယ်.
လဲစရာလည်း ဘာမှ ပါမလာတော့တဲ့အပြင် လဲချင်စိတ်လည်း မရှိတော့တာမို့ နို့ဆီတွေ ပေကျံနေတဲ့ ဘောင်းဘီနဲ့ပဲ လှေကားထစ်တွေပေါ်ကို တက်လာခဲ့တယ်.
အနံ့ခပ်စူးစူးက သူ့နှာခေါင်းဝကို ဆီးကြို နှုတ်ဆက်တယ်. အသက်တစ်ချက် ခပ်ပြင်းပြင်းရှူသွင်းလိုက်ပြီး လူတွေအုံနေတဲ့ အခန်းလေးတစ်ခန်း ရှိရာဖက်ကို လှမ်းလျှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်.
အဲလိုပြောပြီး လှည့်ထွက်သွားတဲ့ ကုတ်အင်္ကျီအဖြူရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ ကျောပြင်ဟာ လမ်းတလျှောက်လုံး သူတင်းလာခဲ့ရတဲ့ အားမာန်တွေကို ရိုက်ချိုးပစ်လိုက်ခဲ့တယ်.
နာ့စ်မလေးကတော့ တာဝန်ဝတ္တရားအရ ခံစားချက်ကင်းမဲ့တဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ပဲ လူနာရဲ့ နှာခေါင်းမှာ တပ်ထားတဲ့ ပိုက်တွေကို ဆွဲဖြုတ်နေခဲ့တယ်.
သူမကတော့ မျက်ရည်တွေကို မျက်တောင်တွေကြားထဲမှာ ပုတ်ခတ်သိမ်းဆည်းလိုက်ပြီး ဆွဲခြင်းအ၀ါလေးထဲက လက်သုတ်ပုဝါလေးကို ဆွဲထုတ်လို့ သူ့ပါးစပ်နားမှာ ပေကျံနေတဲ့ ချွဲတစ်ချို့ကို အသာသုတ်ပေးလိုက်တယ်.
နောက်ဖက်ကို တစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ရပ်နေတဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက်ကို သူမ တွေ့သွားခဲ့တယ်.
မေးခွန်းတွေ ပြည့်နေတဲ့ သူ့မျက်ဝန်းတွေကို နားလည်လွန်းစွာနဲ့ သူမတစ်ချက် လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီး မတုန်အောင် ထိန်းထားတဲ့ အသံနဲ့ ပြောရှာတယ်..
"ဆရာဝန်က အိမ်ကို ပြန်သယ်ခိုင်းလိုက်တာ...."
ဒါပါပဲ... ဒီစကားတစ်ခွန်းကို သူကြားပြီးနောက် အခန်းထဲမှာ ချိတ်ထားတဲ့ နာရီတွေ၊ သူ့လက်ပေါ်မှာ ပတ်ထားတဲ့ နာရီတွေ၊ သူ့ဘေးနားမှာ ကြားနေရတဲ့ စကားသံတွေ... အို.. အရာရာအားလုံး ပကတိ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားခဲ့တယ်.
အပေါ်နှုတ်ခမ်းကို မနာ့တနာ ကိုက်ထားပြီး ကုတင်ပေါ်က လူနာကို နှမျောတသလွန်းစွာ ငေးကြည့်နေဖြစ်ခဲ့တယ်.
၀င်လာတဲ့ လူသုံးယောက်ကို လှမ်းကြည့်ရင်း သူမမေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းက သူ့နားထဲမှာ မကြားတစ်ချက် ကြားတစ်ချက်...
အပြင်မှာ နှင်းတွေ မကျနေခဲ့ဘူး. ဒါပေမယ့် မှုန်ရီေ၀၀ါးနေခဲ့တယ်.
ဆောင်းရာသီမှာ လျှပ်စီးတွေ မလက်ခဲ့ဘူး. ဒါပေမယ့် မိုးကြိုးပစ်သံတစ်ချက် သူကြားလိုက်ရတယ်.
မျက်စိကို ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မှ လူနာကုတင်ရဲ့အောက်က သံဘီးလုံးတွေ တမံသလင်းပေါ်မှာ ပြေးလွှားနေတဲ့ အသံဆိုတာကို သဘောပေါက်လိုက်ရတယ်.
အောက်ထပ်ကို ရောက်ပြီး ကားအစိမ်းလေးရဲ့ နောက်ခန်းထဲကို လူနာကို အသာအယာတင်လို့ ဆေးရုံဝင်းထဲက မောင်းထွက်လာချိန်မှာတော့ ဆေးရုံအ၀နားက ဆိုင်းဘုတ်က သူ့ကို ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ နှုတ်ဆက်တယ်.
၀င်းကြီးထဲကို ၀င်တော့ စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေ၊ သိချင်စိတ်ပြင်းပြနေတဲ့ လူတစ်ချို့တွေက ကားနောက်ကို လိုက်လာကြတယ်.
အိမ်ပေါ်ထပ်မှာ ကုတင်နေရာတွေ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပြီး သယ်လာခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဖြစ်သလိုပဲ အခန်းထောင့်မှာ စုပုံထားလိုက်တယ်.
စေးကပ်ကပ်ဖြစ်နေတဲ့ ဘောင်းဘီကို အခန်းထဲမှာ ၀င်လဲလိုက်ပြီး အပြင်ကို ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်. အပြင်မှာ လူတွေလည်း အတော်စုံနေပါပြီ...
လူနာကို ကုတင်ပေါ် အသာလှဲတင်လိုက်ပြီး ခုံပုလေးတစ်လုံးကို ဆွဲယူလို့ သူမ ၀င်ထိုင်လိုက်တာကို ပြတင်းပေါက်နားလေးကနေ သူရပ်ကြည့်နေခဲ့တယ်.
မာလကာပင်ကိုင်းကြီးက ပြတင်းပေါက်ထဲကို တိုးဝင်လို့ အခြေအနေကို အကဲခတ်စူးစမ်းနေခဲ့တယ်.
တံခါးဝနားမှာ ရပ်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ကို အဲလို လှမ်းပြောပြီး သူမ သူ့ဖက်ကို လှမ်းကြည့်တယ်. မျက်တောင်မခတ်ဘဲ သူမ မျက်ဝန်းတွေကို သူ ပြန်စိုက်ကြည့်နေခဲ့မိတယ်.
မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့ သူမ မျက်ဝန်းတွေ ပြန်လွှဲဖယ်သွားခဲ့တယ်... သူ့ရင်ထဲမှာလည်း ဆစ်ခနဲ တစ်ချက်နာကျင်သွားခဲ့တယ်.
အိမ်ရှေ့ဖက်ကို မျှော်ကြည့်လိုက်တော့ မေယုဈေးကြီးက ထုံးစံအတိုင်း ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေမြဲ...
ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေ၊ ဈေးသူဈေးသားအချို့တွေက ဆိုင်ထိုင်ရင်း၊ ဈေးဝယ်ရင်း သူတို့အိမ်ဖက်ကို လှမ်းလှမ်းကြည့်နေတာကို သူသတိထားမိလိုက်တယ်.
တစ်ယောက်ယောက် ဖွင့်လိုက်တဲ့ တရားခွေသံက ကြည်လင်အေးမြစွာ ထွက်ပေါ်လာတယ်.
"နောင်.... ဝေ.... ဝေ.... ဝေ...... ဝေ..." ဆိုတဲ့ ကြေးစည်သံကလည်း ခပ်မှန်မှန်လေး ရိုက်ခတ်မြည်ဟည်းနေတယ်.
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး. ကြမ်းပြင်ကို စိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်. ဒါပေမယ့် မတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး. မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေ ပြည့်လျှံလာခဲ့တယ်.
ပြတင်းပေါက်ဖက်ကို ဆတ်ခနဲလှည့်ပြီး စက်မှုလက်မှု ကျောင်းဝင်းကြီးထဲကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့က သူ့ကို စာနာတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ ငေးကြည့်နေခဲ့ကြတယ်.
နောက်ပြန်လှည့်ပြီး ကုတင်ပေါ်က လူနာရဲ့ နိမ့်ချည်မြင့်ချည်ဖြစ်နေတဲ့ ရင်အစုံကို စိုက်ကြည့်နေခဲ့လိုက်ပြန်တယ်.
လူနာရင်ဘတ်ပေါ်က တီရှပ် အင်္ကျီအဖြူပေါ်မှာ UNDP ဆိုတဲ့ စာသားကြီးက အပြည့်နေရာယူထားခဲ့တယ်. အဲဒါကို မြင်မှ သူ့မျက်ရည်တစ်ချို့ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို လွင့်စင်ကျကုန်တယ်လို့ သူခံစားမိလိုက်တယ်.
နောက် နောင်... ကျွန်တော်နဲ့အတူ ဆုပေးပွဲတွေကို တက်ရောက်ခွင့် မရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်...
"မောင်... ကလေးတွေလည်း ရှင်ပြုပြီးပြီ... ရွာမှာလည်း အလှူဒါနတွေ လုပ်ပြီးပြီ.... သားသမီးတွေအတွက်လည်း မပူနဲ့... အားလုံး အဆင်ပြေတယ်. သွားလိုရာကို ဖြောင့်ဖြောင့်သွားပါနော်..."
"ဘာမှစိတ်မပူနဲ့.. အမာ့ကိုလည်း စိတ်ချပါ. မောင်သွားလိုရာကို ဖြောင့်ဖြောင့်သွားပါနော်. ဘာမှ နောက်ဆံမတင်းနဲ့... အလှူအတန်းတွေလည်း လုပ်ပြီးပြီ......"
ဒီလိုစကားတွေကို ဒီလိုနေရာမှာ ဒီလိုမတုန်ယင်တဲ့ လေသံနဲ့ ဒီလိုပြောနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ သူမလို မိန်းမမျိုး၊ သူမလို ဇနီးမယားမျိုး၊ သူမလို အမေမျိုး.... ဘယ်မှာ ရှိမလဲ...........
သူ့မာနတွေ တင်းခနဲ တစ်ချက်ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်. ပါးပြင်ပေါ်က မျက်ရည်တွေကို ညာဖက်လက်နဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပွတ်သပ်ရင်း သုတ်ပစ်လိုက်တယ်.
ဟုတ်တယ်... အမေတောင် ဒီလိုနေနိုင်မှတော့ သူလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး တည်ငြိမ်အောင်နေတတ်ရမယ်...
မနေ့က ဖုန်းပြောဖြစ်ခဲ့တာကို ပြန်စဉ်းစားနေမိခဲ့တယ်.
"မောင်လေး..... အဖေ ဘယ်လိုနေလဲဟင်..."
စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ လှမ်းမေးနေတဲ့ အစ်မကြီးရဲ့ အမေးကို အားတင်းပြီး သူပြန်ဖြေလိုက်တယ်.
"အဖေ သက်သာပါတယ်... ဘာမှစိတ်မပူနဲ့... အေးအေးဆေးဆေးလာ..."
မုသားဖြူဆိုတာ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါပေါ် မူတည်ပြီး အသုံးချတတ်ရတယ်ဆိုတာ သူ နုနယ်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက နားလည်အောင် ဘ၀ဆိုတာကြီးက သင်ပေးခဲ့တယ်.
ဘေးမှာ ရပ်နေတဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူကို လှမ်းအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့ သူ့မျက်နှာကြီးကလည်း ရဲတွတ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်.
အတွေးတွေက အဝေးကို ပြေးသွားလိုက်၊ အနီးကို ပြန်ဝင်လာလိုက်နဲ့ ဘာကိုမှ သူအာရုံစူးစိုက်လို့ မရဘူး ဖြစ်နေခဲ့တယ်...
ခပ်မှန်မှန်လေး ရှူရှိုက်နေတဲ့ အသက်ရှူသံတစ်ချက် ဖြည်းဖြည်းချင်း အားလျော့တိုးညှင်းသွားချိန်မှာ ကောင်းကင်ကြီးက ရုတ်ချည်းညိုမည်းပြိုဆင်းလာသလို သူ့ရင်ထဲမှာ ခံစားလာရတယ်.
အဖေ့နားနားမှာ ကပ်ပြီး ပြောနေတဲ့ အမေ့ရဲ့ စကားသံတွေေ၀၀ါးလုံးထွေးနေသလို သူထင်နေမိတယ်. အမေ့ရဲ့ လက်တစ်ဖက်က အဖေ့ရဲ့ နှာခေါင်းဝနားမှာ အသာလေး သွားစမ်းတယ်.
ရင်ဘတ်ကို အကြာကြီး စိုက်ကြည့်နေတယ်. နောက်တစ်ဖန် သေချာအောင် အဖေ့နှာခေါင်းဝနားမှာ အမေ့လက်ညှိုးလေး သွားစမ်းတယ်.
အားလုံးက ပင့်သက်ဖိုစွာနဲ့ အမေ့ရဲ့ လက်ညှိုးလေးကို ၀ိုင်းပြီး စိုက်ကြည့်နေကြတယ်.
နေလောင်နေတဲ့ အမေ့ရဲ့ လက်ညှိုးလေး လေထဲမှာ တဆတ်ဆတ် တုန်ယင်လာတယ်. ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်စွမ်း မရှိတော့သလို အဖေ့ရင်ဘတ်ပေါ်ကို ပြုတ်ကျသွားတယ်.
အမေတစ်ချိန်လုံး တင်းလာတဲ့ သူ့အင်အားတွေကို လျှော့ချလိုက်တာကို သူတွေ့လိုက်ရတယ်.
ကြေးစည်သံလည်း ရပ်တန့်သွားခဲ့ပြီ. တရားသံကတော့ ဆက်လက်ထွက်ပေါ်နေမြဲ..
စကားတတွတ်တွတ်ပြောနေတဲ့ အမေ ငြိမ်ကျသွားတယ်.
ပြီးတော့ အမေ့ခန္ဒာကိုယ်လေး တသိမ့်သိမ့်တုန်လာတယ်.
ပြီးတော့ .... အပေါ်ကို တစ်ချက်မော့ပြီး အမေအသက်အ၀ကြီး ရှူသွင်းလိုက်ခဲ့တယ်.
အဖေ့ရဲ့ အသက်မဲ့နေတဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာကို...
ဒီနေ့ဒီချိန်ထိ သူ့နားထဲမှာ လတ်ဆတ်စွာ ကြားယောင်နေဆဲ၊ သူ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ ပြတ်သားစွာ ထင်ကျန်နေဆဲ...
မျက်ရည်ဆိုတာ ထိန်းချုပ်လို့ မရနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုဆိုတာ အဲဒီ့နေ့က သူ ကောင်းကောင်းကြီး သိလိုက်ရတယ်.
သူ့ပါးစပ်က အဖေလို့ တစ်ချက်အော်ပြီး မငိုခဲ့ဘူး.. ဒါပေမယ့် ရင်ဘတ်တွေ တဆတ်ဆတ်တုန်ခါနေပြီး မျက်ဝန်းတွေေ၀၀ါးမှုန်ရီနေခဲ့တာကိုတော့ သူသိနေခဲ့တယ်.
အဖေ့နားမှာ ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးနေတဲ့ အမေ့ရဲ့ ပုခုံးပေါ်မှာ သူ့လက်ကို တင်ထားခဲ့တယ်.
နာရီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ၁၀ နာရီ ၅၅ မိနစ်...
မျက်ဝန်းတွေနဲ့တင်မကဘူး... ရင်ဘတ်နဲ့... နှလုံးသားနဲ့... ဘ၀မာနနဲ့...
တစ်ရက်ထဲတင် ငိုခဲ့တာမဟုတ်ဘူး.. နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်ငြိမ်စွာနဲ့ အသံတိတ်ငိုကြွေးခဲ့တာ...
မျက်နှာကျက်ကို စိုက်ကြည့်နေတဲ့ သူ့မျက်ဝန်းတွေ ရုတ်ခြည်းဆိုသလို စိုစွတ်လာခဲ့ကြတယ်...
ရင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ လက်တွေက တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် တင်းကြပ်နေအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားကြတယ်.
မျက်ဝန်းတွေကို အသာပြန်မှိတ်လိုက်ရင်း ၀င်သက်ထွက်သက်ကို မှန်အောင် ပြန်ရှူရှိုက်နေလိုက်ခဲ့တယ်.
တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ ၀င်သက်ထွက်သက်ကို ရတဲ့တခဏမှာ ကုတင်အောက်ကိုဆင်းလို့ သွားပွတ်တံ၊ သွားတိုက်ဆေး၊ တဘက်ကို ဆွဲရင်း ရေချိုးခန်းဖက် လှမ်းထွက်ခဲ့တယ်.
ရေချိုးခန်းထဲကမှန်မှာ ပေါ်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးရဲ့ အားမာန်တောက်ပနေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေကို တည့်တည့်စိုက်ကြည့်ရင်း အာရုံတွေကို စုစည်းနေခဲ့လိုက်တယ်.
မနက်စာကို ရှိတာလေးနဲ့ အေးချမ်းစွာ စားသောက်၊ အဖေ့အတွက် မေတ္တာပို့ ဘုရားရှိခိုးပြီး အပြင်ကိုထွက်လို့ ဘူတာရုံရှိရာဆီ လှမ်းလျှောက်နေတဲ့ သူ့ကို ဇန်န၀ါရီ (၂) ရက်ရဲ့ ကောင်းကင်က ယုံကြည်ကိုးစားစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်သခဲ့တယ်.
လမ်းလျှောက်နေရာက ခေတ္တရပ်၊ ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်ရင်း မျက်ဝန်းတွေကို အသာမှေးမှိတ်၊ အသက်ကို ၀အောင်ရှိုက်သွင်းလိုက်ပြီး အဖေ့ရဲ့ ပုံရိပ်ကို မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်တယ်..
ဂျက်ကက်အင်္ကျီဇစ်ကို ဆွဲပိတ်၊ သိုးမွှေးဦးထုပ်ကိုဆောင်း၊ အင်္ကျီအိတ်ထဲလက်ထည့်လို့ နှင်းတောထဲ တိုးဝင်သွားတဲ့ ဒီခြေလှမ်းတွေ ဘယ်လိုအခက်အခဲကိုမှ မမှု၊ ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုမျိုးကိုမှ မကြောက်ရွံ့၊ ဘယ်လိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်မှုမျိုးကိုမှ မတုန်လှုပ်ဘဲ ရဲဝံ့ယုံကြည်နေဆဲပဲ အဖေ...